Mgbe ị na-enyocha isiokwu nke mgbasa oziM mere ihe infographic na Otu Mgbasa ozi si eme ka anyị zụta. Ihe omuma nke di n’okpuru n’emepee n’echiche na ulo oru di otutu ma nwekwa otutu ego ma ha were ya duhie ndi na ege ha nti. Echere m na nke ahụ bụ echiche na-enye nsogbu, ọdachi, na eleghi anya.
Echiche mbụ nke naanị ụlọ ọrụ ndị bara ọgaranya na-akpọsa bụ echiche dị ịtụnanya. Companylọ ọrụ anyị abaghị ọgaranya ma, n'ezie, nwere ọtụtụ afọ nke ọghọm - mana anyị ka na-akpọsa. Mgbasa ozi, karịsịa site na ọwa dijitalụ, dị oke ọnụ. Can nwere ike itinye $ 100 n'ime mmekọrịta ọ bụla ma ọ bụ nyocha ọchụchọ na-akwụ ụgwọ site na akaụntụ ọ bụla na ịkwanye ụfọdụ mgbasa ozi ezubere iche iji mee ka azụmahịa gị mara.
Omume azụmahịa anaghị adaba na ọnụ ọgụgụ dị adị na ụwa mgbasa ozi. Banyere a otu ụzọ n'ụzọ anọ nke azụmahịa niile na-ada n'ime afọ abụọ mbụ dị ka ọtụtụ ọmụmụ. Mgbe ndị mmadụ kwenyere na ụlọ ọrụ nkezi na-eme oke ego 36%, nkezi uru uru maka nkeji iri na ise kachasị nso bụ 7.5% na oke uru uru bụ 6.5%.
Ndepụta Angie, dịka ọmụmaatụ, gara n'ihu na-arụ ọrụ na mfu mgbe ọ na-etinye $ 80 nde na azụmaahịa - yana nnukwu akụkụ nke na-aga mgbasa ozi telivishọn ị na-ahụ ugboro ugboro na telivishọn. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ọha na eze na-arịwanye elu na-akpata ego ụzọ anọ, ọ na-esiri ha ike ọgaranya. Ọ bụghị naanị na ha enweghị ọgaranya, mana ha anaghị akpọsa ngwa ahịa iji mee ka ndị ahịa ha nwee mmetụta ọgaranya. Ndepụta Angie na-enye ọrụ iji kpuchido ndị ahịa na-ahụ maka ọrụ n'ụlọ ka ha ghara ịnwụ site na plethora nke ndị na-eweta ihe mkpuchi n'ebe ahụ.
Mgbasa ozi na-arụ ọrụ na ọkwa dị iche iche; ọ dịghị mfe dịka ịnwa ime ka mmadụ zụta ihe. N'ime afọ iri gara aga nke ọdịnaya, ọchụchọ, na mmekọrịta ọhaneze, ekwenyere m na ụlọ ọrụ na-achọsi ike n'eziokwu ahụ na mgbasa ozi kwesịrị ịdị omimi karịa ị na-achịkwa enweghị ntụkwasị obi nke ndị ahịa. Mgbasa ozi ezubere iche maka ndị na-eri ihe yiri ndị na-ege gị ntị na-abawanye uru site na ịnweta na ịchekwa ndị ahịa dị ukwuu.
Gịnị Mere E Ji Jiri Mgbasa Ozi?
Ndabere maka mgbasa ozi niile bụ naanị ịmara. Ima ihe n’eme ka ulo oru mara ihe oma:
iru - Iji wulite ọchịchọ maka ika, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ị ga-enwerịrị ike iru ndị na-ege gị ntị ọhụrụ. Ndị na-ege ntị adịlarị na weebụsaịtị, ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta, redio, telivishọn, na ndị ọzọ. Iji ruo ndị ahụ na-ege ntị, ụlọ ọrụ ndị tinyere ego ma nweta ha na-enye mgbasa ozi.
nghọta - Ikekwe ndị mmadụ amatalarịrị ngwaahịa na ọrụ gị mana enweghị nghọta dị mma banyere akara gị. Iji gbochie echiche ezighi ezi, ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ (ma ọ bụ nkatọ) maka ụdị iji tinye ego na mgbasa ozi.
Sales - saleskwọ ụgbọala site na mgbasa ozi nwere ike ịdị irè, mana m ga-ama gị aka ka ị debe mgbasa ozi ọdịnala na dijitalụ maka otu izu wee hụ ole ọ lekwasịrị anya na-agbada na sales. N’uche m, ọ na-ada. Ọtụtụ mgbe, anyị na-achọpụta na ọ bụ ezie na ahịa nwere ike ịba ụba, ụlọ ọrụ ndị na-adabere na ya ogologo oge nwere ike imebi aha ha.
Kedụ ka Mgbasa Ozi Si Arụ Ọrụ?
Ndị ọchụnta ego na ndị ahịa na-achọ imeziwanye ndụ ha na arụmọrụ nke azụmaahịa ha. Ọ bụ ezie na obere akụkụ nke ndị mmadụ nwere ike ịnwe enweghị ntụkwasị obi nke mgbasa ozi na-emetụta, ekwenyere m na nke ahụ pere mpe. N'uche nke m, imirikiti ahịa netwọkụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị iche iche na-arụ ọrụ n'ọgbọ a. Kpọla gị oku na otu n’ime mmemme ndị a? Ha bu nnukwu ememe nke ndi mmadu nwere obi uto nke emere na nkwa nke nnukwu ego, ezumike na obuna ugbo iji kwenye ndi obia itinye ego ma malite ire ha. Vemma, bụ ihe ọ drinkụ drinkụ ike MLM, bụ n'oge na-adịbeghị anya mechie nwa oge dị ka atụmatụ pyramid.
Ọ bụ ezie na nke ahụ dị oke njọ, ọ bụghị ụkpụrụ. Lelee mgbasa ozi Apple na-ahụkarị na ị gaghị ahụ mbelata ma nweta atụmatụ ngwa ngwa. Kama nke ahụ, ị ​​ga-ekiri akụkọ banyere ndị mmadụ na-egosipụta ihe dị n'ime ha na-eji ngwaọrụ Apple na ngwanrọ dịka ngwaọrụ. Rịba ama Mgbasa ozi Coca-Cola na ị ga-ahụ na-elekwasị anya na ihe omume na ebe mgbakọ ha na-akpọsa na, na-anwa ịme ka a mara ụdị ebe ncheta obi ụtọ na-eme. Na nso nso a, ha aghaghi ịrụ ọrụ na nghọta nke ihe ọ sweetụ ofụ na-atọ ụtọ na ihe egwu ahụike na-ebilite.
Advertisingfọdụ mgbasa ozi na-arụ ọrụ na mkpali ịchekwa ego (ego), mana enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere mgbasa ozi ji arụ ọrụ:
Obodo - Mgbe ụfọdụ mgbasa ozi dị mkpa iji nye ndị na-ege ntị na mpaghara eziokwu na ị nwere ọnọdụ dị nso. Ikekwe ị na-achọ ụdị pizza NY dị nso, yabụ na pizzeria dị na mpaghara na-akpọsa maka okwu dabere na ọnọdụ na ọchụchọ ma ọ bụ na-elekwasị anya na mmasị pizza n'ime okirikiri gburugburu ụlọ nri ha.
ọrụ - Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-elezi anya na azụmaahịa ndị na-elekwasị anya na nkwado, iche iche, na itinye aka na obodo. Mgbasa ozi nwere ike rụọ oke ọrụ n'ịgbanwe echiche nke ụlọ ọrụ na-enweghị ihu, nnukwu ụlọ ọrụ na nke na-enye onyinye na agụmakwụkwọ iji nyere ndị obodo aka. Salesforce nakweere ụlọ akwụkwọ dị na Indianapolis n'oge na-adịbeghị anya, inye onyinye $ 50,000 na akụrụngwa iji nyere ha aka.
Research - Ebee ka ị na-aga mgbe ị na-enyocha ezumike gị ọzọ, ụgbọ ala ọzọ ị ga-azụ, mkpuchi gị, ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ dị mkpa? Mgbasa ozi na-enye ihe ọmụma iji nyere aka kụziere ndị ahịa na azụmaahịa agbawaala n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụ ezie na ebumnuche bụ iwulite ntụkwasị obi na ikike site na ịnye nyocha dị mkpa, ọ bụghị mgbe niile ka ebumnuche zụrụ. Ọtụtụ oge ọ na-enye nyocha mbụ ma ọ bụ nke abụọ nke agbasaara ebe niile. M na-ahụkarị mgbasa ozi gbasara ọdịnaya ndị nwere ike ịmasị ndị enyi m ma zigara ha ha.
Mmetụta - Akụkọ akụkọ agbasaala ihu nke ọtụtụ usoro mgbasa ozi maka na ọ bụghị naanị na-ejikọ mmetụta uche na ndị na-ege ntị, emepụtara ya iji duru onye na-ekiri ya ma ọ bụ onye na-agụ ya site na akụkọ ahụ. Fọdụ nwere ike iche banyere nke a dị ka ịmegharị, mana nke ahụ enweghị ike ịkọwapụta mgbasa ozi dị irè nke na-akpali mmetụta uche.
Ịga n'ihu - N'iji mmetụta uche, mgbasa ozi na-ekwenyekarị. Dọkịta Robert Cialdini na-akọwa ụkpụrụ isii nke nkwenye nke ụwa niile ejirila nke sayensị gosipụtara iji kwenye ndị na - ege ntị na - ikwughachi ya, ụkọ, ikike, nkwụsi ike, mmasị na nkwekọrịta.
Ka anyi ghara ichefu
Ọ bụrụ na ebumnuche ọjọọ nke mgbasa ozi bụ iji kpalie ire ere, imirikiti anaghị arụ ọrụ ma ọlị. Ọ bụrụ na mgbasa ozi bụ ajọ omume na aghụghọ, anyị niile na-agba ọsọ na McDonalds iji wepụta oge iji soro ezinụlọ na igbe nke McNuggets nọrọ! Mgbasa ozi dị oke ọnụ ma, ọtụtụ mgbe karịa, bụ ịgbanwe echiche ma mee ka mmatawanye. Mgbasa ozi, dị ka ọtụtụ usoro ịzụ ahịa ahịa ndị ọzọ, bụ atụmatụ dị ogologo oge nwere nnukwu ihe egwu metụtara ya.
Kedu otu Mgbasa ozi si eme ka anyị zụta?
Anaghị m ajụ ajụjụ banyere usoro edere n'akwụkwọ ozi a, Ana m ajụ ihe mkpali ahụ. Mgbasa ozi adịghị ebe ahụ iji ghọgbuo ma ọ bụ menye mmadụ ụjọ ịzụrụ. Mgbasa ozi ga-enwerịrị mmetụta maka mmetụta ka ukwuu - mana nke ahụ apụtaghị na ọ na-eji aghụghọ eme ihe… ọ pụtara na ọ dị mkpa. Ikekwe obi ga-eru m ala ma ọ bụrụ na aha ya bụ Otu Mgbasa Ozi Si akwali Anyị tozụta. Ahụtụbeghị m mgbasa ozi manyere m ịpị, mana ahụla m ụfọdụ mgbasa ozi dabara na mkpa m nke m pịrị.
Kama nke ahụ, ndị na-akpọsa ngwa ahịa ejirila usoro dị iche iche mepụtara nnwale ziri ezi nke na-ewu ewu iji nweta ndị ahịa. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị anaghị aghọta ya oge niile, atụmatụ ndị a niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Nke a bụ infographic nke m na-akatọ Ibe weebụ.
Tags: ịkpọsamgbasa ozimgbasa oziikikeMmatankwenyeagbanwe agbanwemmetụta ucheotú mgbasa ozi na-eme ka anyị zụtaotú mgbasa ozi si arụ ọrụkedu ka mgbasa ozi si arụ ọrụamasịnghọtakwenyeikwenyeirunnyeferesearchibu ọrụNkwado ire ahịan'ụkọgburugburuibe weebụ fx
Mee 10, 2016 na 11: 50 AM
Echere m na akụkụ kachasị mkpa nke mgbasa ozi bụ mkpali. Ọ bụrụ na ndị ahịa enweghị mkpali ịzụta smth anyị nwere nhọrọ abụọ. Ma ọ bụ mepụta mkpali (ihe atụ zuru oke iPhone) ma ọ bụ chefuo ya.
Aug 25, 2017 na 1:11 PM
Echere nke ọma. Mgbe ndị mmadụ na-eche banyere mgbasa ozi ha na-echefukarị banyere ihe di na nwunye. Nke mbụ, obere azụmahịa. Obere ụlọ ọrụ, karịsịa na mbido, enweghị “akara”. Ihe dị ha mkpa n'ezie bụ ikike ịgakwuru ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị mmadụ maka ụgwọ dị ala. Naanị mgbe azụmahịa gachara nwere ike ịmepụta akara. Ihe dị ha mkpa n'ezie bụ ikike ịgwa ndị mmadụ na ọnụ ụzọ ha ghere oghe ma na ha adịla njikere ịzụ ahịa.
Ihe nke abuo m chere na otutu ndi mmadu na echefu bu na ndi dibia ahia na ndi kompeni n’etinye ego ha. Edebeghị ọnụahịa ndị ahụ na mmekọrịta dị mkpa na ihe obere azụmaahịa chọrọ. Aga m adị njikere ịkụ nzọ na ọtụtụ n'ụdị ọnụahịa sitere na ikuku nkịtị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị na-ajụ mgbasa ozi na-echebara ndị ahịa ha echiche n'ezie, ha ga-agba mbọ hụ na mgbasa ozi ha na-enye bụ nke dabara adaba ma dịkwa mkpa karịa na azụmaahịa ha na-akpọsa maka ego na-akpata ego karịa mgbe ahụ ọ na-efu maka mgbasa ozi.
naanị n'ihi na onye mgbasa ozi na-erute otu nde mmadụ nke na-egosighi na ndị ahụ bụ ndị ziri ezi, na ndị ahụ dị njikere ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ, ma ọ bụ na ha nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ntọala niile sitere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ga-ekpughere gị XY ma ọ bụ Z. Ha anaghị ekwu na anyị ga-agba mbọ hụ na anyị chụpụrụ ndị mmadụ n'ọnụ ụzọ gị. ọ na-amasị m mgbe ha na-ekwu ihe dị ka “ọ nweghị nkwa na mgbasa ozi.” Ihe m na-aza na nkwupụta ahụ bụ, “enwere otu nkwa na mgbasa ozi na nke ahụ bụ na ị ga-ewere ego m. Ma ihe ị nwere ọ baara m uru ma ọ bụ na ọ bụghị, ị ga-anara ego m. ”